UHF ကြက်ဘဲခြေသံကိုအလိုအလျောက်ညှိပါ, UHF ဝေးဝေးကြက်သားဘဲကြက်သည်ခြေသံကိုအလိုအလျောက်ညှိပေးသည်
 » တိရိစ္ဆာန်သတ်မှတ်ခြင်း
တိရိစ္ဆာန်သတ်မှတ်ခြင်း RFID Automatically Adjust Poultry Foot Ring, RFID Long-distance Chicken Duck Goose Automatically Adjust Foot Ring, UHF Automatically Adjust Pigeon Foot Ring, UHF ကြက်ဘဲခြေသံကိုအလိုအလျောက်ညှိပါ, UHF ဝေးဝေးကြက်သားဘဲကြက်သည်ခြေသံကိုအလိုအလျောက်ညှိပေးသည်
ထုပ်ပိုးပစ္စည်း: ကို ABS / PVC + တင်သွင်း epoxy (ခက်ကော် / ပျော့ကော်)
ဆက်သွယ်ရေး protocol များ: ISO ကို 14443 TypeA / B,, ISO ကို 15693, EPC အတန်းအစား 1 ဗိုလ်ချုပ်ကြီး 2, က ISO 18000-6C / B,
စာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်းအကွာအဝေး: 5~ 10cm, 30cm မှလှိုင်းနှုန်းသည် UHF tag ကိုစာဖတ်ခြင်းအကွာအဝေးအထိ
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -20ကို C ~ + 85 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဒီဂရီ
တည်မြဲခြင်း: 100,000 ကြိမ်
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအဆင့်ကို: IP67 / IP68
ဆက်သွယ်ရေး protocol ကို: EPC C1G2, ISO ကို 18000-6C
အလုပ်လုပ်အကြိမ်ရေ: 840~ 960MHz
IC chip ကို: Higgs 3
sensing အကွာအဝေး: 1-3M က (according to reader module antenna size and site environment)
ပစ္စည်း: အခွံ: PE
အလေးချိန်: 2.5 ဂရမ်
Operating အပူချိန်: -20ကို C ~ + 55 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဒီဂရီ, no freezing
သိုလှောင်ခြင်းအပူချိန်: -30ကို C ~ + 75 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဒီဂရီ, no freezing
Chemical resistance: meet IP67 standard, ရေစိုခံ, sunscreen, and anti-soaking
The B3011 model UHF poultry foot ring tag is widely used to identify poultry, ကြက်, ဝမ်းဘဲ, Geese, pigeons and other birds, electronic consumption, ထုတ်ကုန်ဖော်ထုတ်ခြင်း, တိရိစ္ဆာန်စီမံခန့်ခွဲမှု, အစားအစာ traceability, breeding of poultry, breeding/epidemic prevention, pigeon competition quarantine, စသည်တို့ကို. Information management and its tracking use mainly provide traceability of animals and their food.
The recognition distance of B3011 model UHF poultry foot ring can reach3မီတာ, open-type adjustable design, automatic adjustment, ရေစိုခံ, sun-proof, and anti-soaking. The surface can be printed with LOGO or number (QR Code or serial number), and the foot ring can be automatically adjusted as the animal grows. ထိုကွောငျ့, it is suitable for tracking management of all poultry and birds.
I am interested in your product UHF Automatically Adjust Poultry Foot Ring, UHF ဝေးဝေးကြက်သားဘဲကြက်သည်ခြေသံကိုအလိုအလျောက်ညှိပေးသည်
prev: RBT-1342S မော်ဒယ် T5577 EM4305 HitagS ချစ်ပ် Animal Tag Read Write Device, T5577 EM4305 HitagS ချစ်ပ်3တွင် 1 Animal Tag Reader
နောက်တစ်ခု: long-အကွာအဝေး 125KHz / 134.2KHz တိရိစ္ဆာန် Tag ကို Channel ကို Reader ကို, ကားရပ်နားကွင်း Reader ကို
RFID HDX တိရိစ္ဆာန်နားကပ်, SIC7999 Chip HDX တိရိစ္ဆာန်နားတောင်း, HDX Chip နွားဝက်သိုး Tag